Bonke abavelisi beplastiki-zingqina ukuqhuma-eTshayina Bonke ababoneleli beplastiki-ubungqina bokudubula kunye neFactory
Uthotho lwe-BCZ8060 isixhobo sesokethi seplagi esiqhambukayo
5. Isebenza kwiigesi ezonakalisayo, ukufuma, kunye neemfuno zokhuseleko eziphezulu;
6. Esebenzayo kwiqela lobushushu nguT1 ~ T6;
7. Isebenza kumgca we-AC 50HZ kunye ne-voltage kwi-690V (380V), Njengesixhobo sokudibanisa iintambo kunye nezixhobo zombane.
Uthotho lwe-BCZ8030 isixhobo sesokethi seplagi esiqhambukayo
7. Isebenza njengesixhobo sokudibanisa iintambo kunye nezixhobo zombane kwi-AC 50HZ, i-voltage kwi-690V (380V) imigca.
BYS series Explosion-proof anti-corrosion plastic (LED) izibane fluorescent
I-1.Isetyenziswa ngokubanzi ekuhloleni i-petroleum, ukucocwa kwe-oyile, iikhemikhali, umkhosi kunye nezinye iindawo ezinobungozi kunye namaqonga e-oyile e-offshore, iinqwelo ze-oyile kunye nezinye iindawo zokukhanyisa ngokubanzi kunye neenjongo zokukhanyisa;
2. 2 kwindawo yegesi eqhumayo;
3. Isebenza kwi-IIA, IIB, II C kwi-atmosphere yerhasi eqhumayo;
4. Ifanele indawo yothuli oluvuthayo 21, 22;
5. Isebenza kwiimfuno zokukhusela eziphezulu, ezifumileyo, eziqulethe iigesi ezinobungozi kwiindawo;
6. Ukukhanyisa kwiiprojekthi zokonga umbane kunye nokugcinwa
yokutshintsha indawo enzima.
BF 2 8158-S series Explosionerosion-proof operation post
1. Isetyenziswa kakhulu kwindawo enokutsha kunye nerhasi eqhumayo efana nokusetyenziswa kwe-oyile, ukucokiswa, ishishini lemichiza, i-oyile engaselunxwemeni.
iqonga, ithangi le-oyile, njl. njl
LA5821 series Explosion-corrosion-proof control button
7. Isetyenziselwa ukujikeleza okufutshane okanye ukuqhawula isiphaluka esincinci sangoku kwisiphaluka solawulo Ukukhutshwa kwemiyalelo yokulawula iiyunithi zombane ezifana ne-contactors kunye ne-relays.
BF 2 8159-S series Explosioncorrosion-proof illumination (amandla) ibhokisi yokuhambisa
6. Esebenzayo kwiqela lobushushu nguT1 ~ T4;
7. Ukuhanjiswa kwamandla okukhanyisa okanye iintambo zombane, izixhobo zombane kwi-/off control okanye Khangela ukugcinwa kunye nokuhanjiswa.
BF 2 8158-S series Explosioncorrosion-proof control box
7. Sebenzisa izixhobo ze-electromagnetic kumgama omde okanye ngokungathanga ngqo ulawule iinjini ezininzi kwindawo yemoto elawulwayo, kwaye ujonge ukusebenza kwesekethe elawulwayo ngezixhobo zombane kunye nezibane zemiqondiso.
I-BF 2 8159-S series Explosioncorrosion-proof circuit breaker
7. Njengesixhobo sombane kunye nesombane kunye nesekethe yokukhanyisa, ingasetyenziselwa iimoto zombane.Ukuqala okungaqhelekanga kunye nokugqithiswa, isiphaluka esifutshane kunye nokukhuselwa kwe-undervoltage ye-motor.
BYS-Ⅲ uthotho Uqhushumbo-ubungqina beplastiki yefluorescent epheleleyo
1. esetyenziswa kakhulu ekutsalweni kwe-oyile, ukusulungekiswa kwe-oyile, kushishino lweekhemikhali, emkhosini nakwezinye iindawo ezinobungozi kunye namaqonga e-oyile angaphesheya kolwandle, iinqwelo ze-oyile kunye nezinye iindawo zokukhanya okuqhelekileyo kunye nokukhanyisa okusebenzayo;
Uthotho lwe-BYS-xY Ukhukuliseko&isibane sefluorescent (i-LED) esingaqhushukiyo(ukucoca)
BJH8030/uthotho Ugqabhuko&ibhokisi yesiphambuka enobungqina bokubola
7. Isetyenziselwa ukudibanisa ukukhanya, amandla ombane, imigca yokulawula, imigca yefowuni, njl.
8050/11 series Explosion&corrosion-proof master controller
7. Isetyenziswe njengothutho lomyalelo kunye nokubeka iliso kwimeko.